नमस्कार अन्य भाषाहरूमा – Vocre
अङ्ग्रेजी भाषामा सबैभन्दा प्रचलित शब्दहरू मध्ये एउटा हो 'हेलो।' हामी यो शब्द प्रयोग गर्छौं जब हामी कसैलाई पहिलो पटक भेट्छौं र जब हामी कुनै दिनमा पहिलो पटक कसैलाई देख्छौं।. हामीले कसैलाई केही घण्टाको लागि पनि नदेखेको बेला पनि प्रयोग गर्छौं! यहाँ अन्य भाषाहरूमा कसरी 'हेलो' भन्न सकिन्छ — स्पेनिसमा नमस्कार सहित, फ्रेन्च, र अधिक!
अझ विस्तृत कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो भाषा अनुवाद अनुप्रयोग तपाईंलाई कुनै पनि भाषामा तपाईंको फोनमा बोल्न दिन्छ. अनुप्रयोग त्यसपछि 'बोल्छ’ तपाईंको इच्छित भाषामा अनुवाद.
नमस्कार अन्य भाषाहरूमा: साझा अभिवादन
अङ्ग्रेजीमा, हामी कसैलाई अभिवादन गर्न र भेट्नको लागि क्याच-अल वाक्यांशको रूपमा 'हेलो' शब्द प्रयोग गर्छौं. हामी यसलाई नयाँ मान्छे भेट्न प्रयोग गर्छौं, पुराना साथीहरूसँग पुनः परिचित र अरूलाई सम्बोधन गर्दै. यहाँ अन्य भाषाहरूमा कसरी 'हेलो' भन्न सकिन्छ — स्पेनिसमा नमस्कार सहित, यहाँ अन्य भाषाहरूमा कसरी 'हेलो' भन्न सकिन्छ — स्पेनिसमा नमस्कार सहित, र अधिक!
हामी पनि "नमस्ते, मेरो नाम हो..." सम्मेलन वा नेटवर्किङ कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा हाम्रो ल्यापलहरूमा स्टिकरहरू.
शब्द को स्पष्ट विकल्प ‘hello’ छ ‘hi’ अङ्ग्रेजीमा. यदि हामी धेरै अनौपचारिक हुन चाहन्छौं वा हामी पनि
अभिवादनमा थोरै व्यंग्य थप्न चाहन्छु, हामी छोटो फारम प्रयोग गर्छौं.
अन्य भाषाहरूमा अंग्रेजी 'हेलो' जस्तै शब्दहरू छन्,' र स्थानीय वक्ताहरूले यी शब्दहरू समान रूपमा प्रयोग गर्छन्. अङ्ग्रेजीमा, हामीसँग विभिन्न शब्दहरू र वाक्यांशहरू पनि छन् जुन अनिवार्य रूपमा हेलोको रूपमा उस्तै अर्थ राख्छ - कम वा कम.
‘हेलो’ को प्रायः प्रयोग हुने समानार्थी शब्दहरूमध्ये एउटा ‘शुभ दिन’ हुन्थ्यो, तपाईले धेरै अमेरिकीहरूले एकअर्कालाई अभिवादन गरेको सुन्नुहुन्न, "शुभ दिन,"तर अन्य देशका मानिसहरू अझै पनि यो वाक्यांश सामान्यतया प्रयोग गर्छन्.
अन्य भाषाहरूमा 'हेलो' भन्नु कसैलाई अभिवादन गर्ने तरिका सिक्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका हो।.
फ्रान्सेलीहरूले प्रायः आफ्नो 'शुभ दिन' को संस्करण प्रयोग गरेर एक अर्कालाई अभिवादन गर्छन्।, तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, “Bonjour, comment allez-vous ?” वा, "शुभ दिन, तिमीलाई कस्तो छ?"
'हेलो' को प्रत्यक्ष अनुवाद हो ‘allo.’ दुई शब्दहरू समान रूपमा उच्चारण गरिन्छ. फ्रान्सेलीहरूले यसलाई उच्चारण गर्छन् ah-low, जब हामी अंग्रेजीमा भन्छौं, “Hell-low.”
नमस्ते स्पेनिश मा
यहाँ अन्य भाषाहरूमा कसरी 'हेलो' भन्न सकिन्छ — स्पेनिसमा नमस्कार सहित? स्पेनिश-भाषीहरू (दुबै ल्याटिन अमेरिकी र स्पेनमा) भन्नु, “Buenos días,” (धेरै फ्रान्सेली जस्तै). यहाँ अन्य भाषाहरूमा कसरी 'हेलो' भन्न सकिन्छ — स्पेनिसमा नमस्कार सहित. वास्तबमा, यहाँ अन्य भाषाहरूमा कसरी 'हेलो' भन्न सकिन्छ — स्पेनिसमा नमस्कार सहित ‘hola.’ आफूले चिनेको व्यक्तिलाई यसो भन्दै अभिवादन गर्नु सामान्य कुरा हो, “Hola, como estas?” वा, “नमस्ते, तिमीलाई कस्तो छ?"
यदि तपाइँ अन्य भाषाहरूमा नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ भने, जस्तै स्पेनिश, पहिलो पटक कसैलाई भेट्दा, तपाईं सामान्यतया भन्नुहुन्छ, “Mucho gusto,” वा, "तपाईँलाई भेटेर खुशी लाग्यो।"
नमस्ते जर्मन मा
यहाँ अन्य भाषाहरूमा कसरी 'हेलो' भन्न सकिन्छ — स्पेनिसमा नमस्कार सहित, यहाँ अन्य भाषाहरूमा कसरी 'हेलो' भन्न सकिन्छ — स्पेनिसमा नमस्कार सहित. जर्मनहरूसँग एउटा शब्द छ जसको अर्थ 'हेलो' हो जुन फ्रान्सेलीसँग मिल्दोजुल्दो छ ‘allo.’ जर्मनीमा, तपाईले भन्नु हुन्छ, “Halo,” जब तपाईं कसैलाई 'नमस्ते' भन्न चाहनुहुन्छ. यो फ्रान्सेली शब्द जस्तै उच्चारण गरिएको छ - तर स्पष्ट रूपमा फरक हिज्जे.
नमस्ते इटालियन मा
इटालियन यस सूचीमा रहेका केही रोमान्स भाषाहरू मध्ये एक हो जसमा ‘हेलो’ जस्तो लाग्ने शब्द छैन।, इटालियनहरू भन्छन्, “Ciao!” जब तिनीहरू नमस्कार भन्न चाहन्छन्. उनीहरूले ‘अलविदा’ भन्नका लागि पनि यो शब्द प्रयोग गर्छन्,’ पनि! 'नमस्ते' को अर्थ हुने अन्य शब्दहरू 'प्रोन्टो' र 'साल्भ' समावेश छन्। यदि तपाईंले पहिलो पटक कसैलाई भेट्दै हुनुहुन्छ भने।, तपाईं पनि भन्न सक्नुहुन्छ, ‘piacere,’ जसको अर्थ ‘तपाईलाई भेटेर खुशी लाग्यो’।
नमस्ते रूसी मा
'हेलो' को लागि रूसी शब्द हो ‘privet.’ किनकि रूसले अङ्ग्रेजी र रोमान्स भाषाहरू भन्दा फरक वर्णमाला प्रयोग गर्दछ, जसरी तपाईंले यो रूसीमा लेखिएको देख्नुहुन्छ ‘Привет.’
नमस्ते मन्डारिन चिनियाँ मा
तिनी हरु मध्ये मन्डारिन चिनियाँमा सामान्यतया प्रयोग हुने वाक्यांशहरू तिनीहरूको 'हेलो' को संस्करण हो,' ‘ni hao.’ Mandarin मा, शब्द प्रतीक प्रयोग गरेर लेखिएको छ. ‘Ni hao’ जस्तै देखिन्छ 你好 Mandarin मा. यो शब्द पनि एक मातृभाषाको रूपमा मन्डारिन नबोल्नेहरूले बोल्ने सबैभन्दा सामान्य रूपमा चिनिने मन्डारिन शब्दहरू मध्ये एक हो।. थप जान्न चाहनुहुन्छ साझा चिनियाँ वाक्यांश? हामीले तपाईंलाई कभर गर्यौं!
पोर्तुगाली भाषामा 'हेलो' को आफ्नै संस्करण छ जुन अन्य रोमान्स भाषाहरूमा शब्द जस्तो नदेखिन सक्छ तर यो जस्तै सुनिन्छ।. पोर्चुगिज भन्छन्, “Olá,” जब तिनीहरू अनौपचारिक रूपमा कसैलाई अभिवादन गर्न चाहन्छन्.
नमस्ते जापानी मा
के तपाई अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि जापानीमा 'हेलो' कसरी भन्न सकिन्छ? यो अन्य भाषाहरूमा 'नमस्ते' भन्नको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय तरिकाहरू मध्ये एक हो. यदि तपाईंले अंग्रेजीमा शब्द निकाल्नुहुन्छ भने, यो जस्तो देखिन्छ: Kon’nichiwa. यदि तपाइँ यसलाई जापानी प्रतीकहरू प्रयोग गरेर लेख्न चाहनुहुन्छ भने, यो जस्तो देखिन्छ: こんにちは.
कम प्रतिनिधित्व गरिएका भाषाहरू जस्तै बारे थप जान्न चाहनुहुन्छ मलाय? हाम्रो भाषा अनुवाद एप जाँच गर्नुहोस्, मा उपलब्ध गुगल प्ले एन्ड्रोइडका लागि वा एप्पल स्टोर IOS को लागी.
नमस्ते कोरियन मा
कोरियाली, एशियामा प्रयोग हुने धेरै भाषाहरू जस्तै, आफ्नै वर्णमाला प्रयोग गर्दछ, अंग्रेजी वर्णमाला भन्दा फरक. कोरिया मा, यसलाई भनिन्छ हङ्गुल. यदि तपाई कोरियनमा 'हेलो' शब्द लेख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले यी प्रतीकहरूसँग त्यसो गर्नुहुनेछ: 여보세요.
शब्दको अंग्रेजी फोनेटिक हिज्जे जस्तो देखिन्छ: Yeoboseyo. अन्य भाषाहरूमा 'नमस्ते' भन्दै, जस्तै कोरियन भाषा नेपाली अंग्रेजी बोल्ने नगर्ने साथीहरूलाई प्रभाव पार्ने एउटा सजिलो तरिका हो.
नमस्ते अरबी मा
अरबी मा बोलिन्छ 25 देशहरू, त्यसोभए तपाईले यो शब्द सुन्नु भएको छ जसको अर्थ इजिप्टमा 'हेलो' हो, इराक, जोर्डन, कुवेत, मोरक्को र कतार, केवल केहि नाम गर्न को लागी. यदि तपाईं शब्दलाई ठूलो स्वरमा भन्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईले भन्नु हुन्छ, “Marhabaan.” लिखित शब्दहरू जस्तो देखिन्छ: هتاف للترحيب.
अझ गहिराइमा जान मन छ? केहि पत्ता लगाउनुहोस् साझा स्प्यानिश वाक्यांश वा केहि सिक्नुहोस् अंग्रेजी देखि फारसी सुझाव र चालहरू.